Foomamka - Xiriirinta TruCare
ROCHESTER Wac (585) 444-5834
SYRACUSE Wac (315) 399-5398
BUFFALO Wac (585) 444-5834
Reviews daryeelka guriga
MAAMULKA DARYEELKA CAAFIMAADKA
TruCare waxaa iska leh oo maamula boqolkiiba konton haween iyo dadka laga tirada badan yahay. Anaga, aasaasayaasha, waxaan ka nimid dhaqanno kala duwan iyo dhaqamo kala duwan, anagoo ka shaqeynay bulshada, dowladda hoose, goobaha daryeelka caafimaadka, adeegyada aadanaha, iyo waaxda waxbarashada.
Xuquuqda daabacaadda © 2022 Xuquuqda daabacaadu way xifdisan tahay
← Dib u laabo
Waxaan u qaadaneynaa arimahaaga gaarka ah si dhab ah
Waxaan u adeegsanaa cookies-ka boggayaga internetka si aan kuu siino khibrada ugu habboon adoo xusuusanaya doorbidkaaga iyo booqashooyinka soo noqnoqda. Adiga oo gujinaya "Aqbal", waxaad ogolaatay isticmaalka DHAMMAAN cookies.
Dejinta cookies AQBAL
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa 'cookies' si loo wanaajiyo khibradaada inta aad ku dhex socoto shabakadda. Kuwaas waxaa ka mid ah, cookies-ka loo qoondeeyey sida loogu baahan yahay ayaa lagu keydiyaa biraawsarkaaga maadaama ay muhiim u yihiin ka shaqeynta howlaha aasaasiga ah ee bogga. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa cookies-ka saddexaad ee naga caawiya inaan falanqeyno oo aan fahamno sida aad u isticmaasho degelkan. Kukiyadaas waxaa lagu keydin doonaa biraawsarkaaga oo keliya ogolaanshahaaga. Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad ka baxdo buskudyadan. Laakiin ka-dhaafitaanka qaar ka mid ah buskudyadan ayaa saameyn ku yeelan kara khibradaada baalasha.
Kukiyada kasta oo laga yaabo inaanay si gaar ah daruuri u ahayn in websaydhku shaqeeyo oo si khaas ah loogu isticmaalo ururinta xogta shaqsiyeed ee adeegsada falanqaynta, xayeysiiska, waxyaabaha kale ee gundhigga ah waxaa loogu yeeraa inay yihiin buskudyo aan loo baahnayn. Waa qasab in la iibsado ogolaanshaha isticmaale kahor intaadan ku shaqeynin cookies-ka boggaaga.